Sale & Marketing Archives - Page4of4- Glory Assumption Space
Sales Staff - M/F ( 3)Posts
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းတွင်ရှိသော Foreign ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Staff - M/F (3)Posts/Salary -150000 Kyats++++/Thingangyun Township -	ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။ -	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၁ နှစ်ရှိရမည်။ -	မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101. ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Staff - မ (၅) ဦး
ဘွဲ့ရ (သို့) အဝေးသင်တက်နေသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁နှစ်ရှိရမည်။
Sales & Marketing Staff - မ (၁၀) ဦး
ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များသို့ Marketing သွားနိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။
Sales & Marketing Staff - Female ( 5Posts )
- ဘွဲ့ရ(သို့မဟုတ်)ကျောင်းကိစ္စရှင်းလင်းသူဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - English (4) Skills ကျွမ်းကျင်သူကို ဦးစားပေးမည်။
Sales & Marketing Staff (Construction Material) - Male/Female ( 10 posts )
Any Graduated 1years experience in related field
ဘွဲ့ရ(သို့မဟုတ်)၁၀တန်းအောင် - အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - တရုတ်စကားပြောတတ်ရမည်။
Sales and Marketing Staff - 10 posts
Age 20 - 25 Matriculation အသက် ၂၀ - ၂၅ အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် တောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အနီးတ၀ိုက်တွင်ရှိသော GAS Agency နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိပါသည်။ 1.	Sales & Marketing Staff	(M/F 10-post) -	ဘွဲ့ရ၊ -	အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ် ရှိရမည်။ -	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြေပြစ်ရမည်။ -	အသက် (၂၅) နှစ်အောက် -	လစာ (150000++++) အထက်ပါ Position များအတွက် Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြင့်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Email	-	gasrecruit.hr5@gmail.com (or) gasrecruit.hr3@gmail.com (or) gasrecruit.hr1@gmail.com Ph No.	-	09-262223785, 09-262223784, 09-262223783. ရုံးခန်းလိပ်စာ	-	Myanmar Professional Training Centre @ MPTC ၊ အမှတ်(29)၊ ပထမထပ်၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ ကြည်မြင့်တိုင် ၊ လှိုင် ၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။
Sale & Marketing Male / Female (10) Posts
--- 10တန်းအောင်။ --- Experience2Years & Above. --- စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ --- လစာ ၁သိန်းခွဲနှင့်အထက်။ Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sale & Marketing Staff (F)15-Posts
- ၁၀ တန်းအောင် (သို့ ) ဘွဲ့ ရ ။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည် ။ - Sat & Sun နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - Ferry ရှိသည်။နေ့ လယ်စာထမင်းကျွေးသည်။